Onyankopɔn Ahobammɔ​—Ɔkwan Bɛn So na Onyankopɔn Bɔ Yɛn Ho Ban? | Bɛn Yehowa
Tumi a Ɛbɔ Nneɛma Ho Ban—“Onyankopɔn Yɛ Yɛn Guankɔbea”
1, 2. Bere a Israelfo duu Sinai mantam mu wɔ afe 1513 A.Y.B. mu no, asiane bɛn na wɔkɔɔ mu, na ɔkwan bɛn so na Yehowa maa wɔn awerɛhyem?
NÁ Israelfo no wɔ asiane mu bere a woduu Sinai mantam no mu wɔ afe 1513 A.Y.B. mfiase no. Ná akwantu bi a ɛyɛ hu—ɔkwan a na wobetu afa “sare kɛse a ɛso yɛ hu a awɔ a wɔhyehye, ne nkekantwɛre wɔ so so”—da wɔn anim. (Deuteronomium 8:15) Wohyiaa asiane a ɛne sɛ na aman a wɔne wɔn ani nhyia bɛtow ahyɛ wɔn so nso. Yehowa na na ne nkurɔfo aba tebea yi mu. Sɛ́ wɔn Nyankopɔn no, so na obetumi abɔ wɔn ho ban?
2 Yehowa nsɛm ma wonyaa awerɛhyem kɛse: “Mo ara moahu nea meyɛɛ Misraim no ne sɛnea mesoaa mo akɔre ntaban so, na mede mo maba me nkyɛn yi.” (Exodus 19:4) Yehowa kaee ne nkurɔfo no sɛ ogyee wɔn fii Misrifo no nsam, na sɛnea yɛbɛka no no, ɔsoaa wɔn wɔ akɔre ntaban so de wɔn kosii dwoodwoo. Nanso, nneɛma foforo wɔ hɔ a enti wɔde “akɔre ntaban” kyerɛkyerɛ Onyankopɔn ahobammɔ mu ma ɛfata.
3. Dɛn nti na “akɔre ntaban” kyerɛkyerɛ Onyankopɔn ahobammɔ mu ma ɛfata?
3 Ɛnyɛ ɔsoro nko na ɔkɔre de ne ntaban tɛtrɛtɛ a emu yɛ den no tu kɔ. Sɛ edu awiabere a, ɔkɔre baatan koa ne ntaban—a ne ntrɛwmu bɛboro mita abien no—mu de yɛ kyinii kata ne mma nkumaa so de bɔ wɔn ho ban fi owia no hyew ano. Ɛtɔ mmere bi a, ɔde ne ntaban kuru ne mma ho bɔ wɔn ho ban fi mframa a ano yɛ nwini ho. Sɛnea ɔkɔre bɔ ne mma ho ban no, saa ara na Yehowa koraa Israel man a na wonni ahoɔden no so na ɔbɔɔ wɔn ho ban. Afei a na ne nkurɔfo wɔ sare so no, na wɔbɛkɔ so anya guankɔbea wɔ ne ntaban kɛse no nwini ase bere tenten a na wɔbɛkɔ so adi nokware no. (Deuteronomium 32:9-11; Dwom 36:7) Na so yebetumi ahwɛ Onyankopɔn ahobammɔ kwan nnɛ ma afata?
Onyankopɔn Ahobammɔ Ho Bɔhyɛ
4, 5. Dɛn nti na yebetumi anya Onyankopɔn ahobammɔ ho bɔhyɛ no mu ahotoso koraa?
4 Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa betumi abɔ n’asomfo ho ban. Ɔne “Ade Nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn”—abodin a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ tumi a biribiara ntumi nsianka no. (Genesis 17:1) Te sɛ asorɔkye a biribiara ntumi nsianka no no, biribiara ntumi nsiw tumi a Yehowa de di dwuma no kwan. Esiane sɛ otumi yɛ biribiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ nti, yebetumi abisa sɛ, ‘So ɛyɛ Yehowa pɛ sɛ ɔde ne tumi bɛbɔ ne nkurɔfo ho ban?’
5 Mmuae no yɛ asɛmfua biako pɛ, ɛyɛ yiw! Yehowa ma yɛn awerɛhyem sɛ ɔbɛbɔ ne nkurɔfo ho ban. Dwom 46:1 ka sɛ: “Onyankopɔn yɛ yɛn guankɔbea ne ahoɔden, ahohia mu boafo pa a wɔanya no nhui.” Esiane sɛ Onyankopɔn ‘ntumi nni atoro’ nti, yebetumi anya n’ahobammɔ ho bɔhyɛ no mu ahotoso koraa. (Tito 1:2) Ma yensusuw mfatoho ahorow a emu da hɔ a Yehowa de di dwuma de kyerɛkyerɛ n’ahobammɔ mu no bi ho.
6, 7. (a) Ahobammɔ bɛn na Bible mmere mu oguanhwɛfo yɛ maa ne nguan? (b) Ɔkwan bɛn so na Bible kyerɛkyerɛ ɔpɛ a Yehowa wɔ wɔ ne komam sɛ ɔbɛbɔ yɛn ho ban na wahwɛ yɛn no mu?
6 Yehowa yɛ Oguanhwɛfo, na “yɛyɛ ne man ne n’adidibea nguan.” (Dwom 23:1; 100:3) Mmoa a wontumi mmɔ wɔn ho ban sɛ nguan no yɛ kakraa bi pɛ. Ná ɛsɛ sɛ Bible mmere mu oguanhwɛfo nya akokoduru de bɔ ne nguan ho ban fi agyata, mpataku, asisi, ne awifo ho. (1 Samuel 17:34, 35; Yohane 10:12, 13) Nanso, mmere bi wɔ hɔ a na ɛsɛ sɛ wɔyɛ nguan no brɛbrɛ de bɔ wɔn ho ban. Sɛ oguan bi anwo nguannan no mu a, oguanhwɛfo pa no hwɛ ɔbaatan no wɔ n’ahohia bere mu, na afei ɔfa oguammaa a onni ahoɔden no de no kɔ nguannan no mu.
‘Obeturu wɔn ne kokom’
7 Yehowa nam ne ho a ɔde totoo oguanhwɛfo ho no so ma yɛn awerɛhyem sɛ ɛwɔ ne komam sɛ ɔbɛbɔ yɛn ho ban. (Hesekiel 34:11-16) Kae Yehowa ho asɛm a wɔkae wɔ Yesaia 40:11 a yesusuw ho wɔ nhoma yi Ti 2 no mu no: “Ɔbɛyɛn ne nguankuw sɛ oguanhwɛfo, obeturu nguammaa ne basa so, na wasoa wɔn ne kokom.” Ɔkwan bɛn so na oguammaa no kodu oguanhwɛfo no “kokom”—ne soro atade hodwoo mu? Ebia oguammaa no bɛkɔ oguanhwɛfo no nkyɛn, na ɔde ne ho atwitwiw ne nan ho mpo. Nanso, oguanhwɛfo no na ɛsɛ sɛ ɔbɔ ne mu ase fa oguammaa no, na ɔde no to ne kokom brɛoo. Ɔpɛ a yɛn Guanhwɛfo Kɛse no wɔ sɛ ɔbɛkora yɛn so abɔ yɛn ho ban brɛbrɛ ho nhwɛso bɛn ara ni!
8. (a) Onyankopɔn ahobammɔ ho bɔhyɛ no mu trɛw ka henanom, na ɔkwan bɛn so na wɔdaa eyi adi wɔ Mmebusɛm 18:10? (b) Dɛn na ɛhwehwɛ sɛ yɛyɛ wɔ guankɔbea a yebenya wɔ Onyankopɔn din mu no ho?
8 Ɛnyɛ obiara na obenya Onyankopɔn ahobammɔ ho bɔhyɛ no mu kyɛfa—wɔn a wɔbɛn no no nkutoo na wobenya. Mmebusɛm 18:10 ka sɛ: “Aban dennen ne [Yehowa, NW] din, ɛno mu na ɔtreneeni guan kɔ, na wɔkora no.” Wɔ Bible mmere mu no, ɛtɔ mmere bi a na wosisi aban wɔ sare so sɛ mmeae a wɔhwehwɛ guankɔbea. Nanso, na ɛyɛ nea asɛm ato no no asɛyɛde sɛ oguan kɔhyɛ aban a ɛte saa no mu de bɔ ne ho ban. Ɛte saa ara wɔ ahobammɔ a yɛhwehwɛ wɔ Onyankopɔn din mu no ho. Ɛhwehwɛ pii sen Onyankopɔn din a yɛbɛkɔ so abɔ ara kɛkɛ; nkonyaa biara nni Onyankopɔn din no ankasa mu. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to Onii a okura saa din no so, na yɛbɔ yɛn bra ma ɛne ne trenee gyinapɛn ahorow hyia. Hwɛ ayamye a ɛyɛ sɛ Yehowa ama yɛn awerɛhyem sɛ sɛ yɛba ne nkyɛn wɔ gyidi mu a, ɔbɛyɛ aban a ahobammɔ wom ama yɛn!
“Yɛn Nyankopɔn . . . Betumi Ayi Yɛn”
9. Ɔkwan bɛn so na Yehowa ayɛ pii sen ahobammɔ ho bɔ kɛkɛ a wahyɛ?
9 Yehowa ayɛ nea ɛsen ahobammɔ ho bɔhyɛ ara kwa. Wɔ Bible mmere mu no, ɔdaa no adi anwonwakwan so sɛ otumi bɔ ne nkurɔfo ho ban. Wɔ Israel abakɔsɛm mu no, Yehowa de ne tumi “nsa” no siw atamfo a wɔyɛ den kwan mpɛn pii. (Exodus 7:4) Yehowa de ne tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban no boaa ankorankoro bi nso.
10, 11. Bible mu nhwɛso ahorow bɛn na ɛkyerɛ sɛnea Yehowa de ne tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban no dii dwuma maa ankorankoro bi?
10 Bere a Hebrifo mmerante baasa—Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego—ankotow Ɔhene Nebukadnesar sika honi no, ɔhene a na ne bo afuw no hunahunaa wɔn sɛ wɔde wɔn begu fononoo a ogya refram wom no mu. Nebukadnesar, ɔhene a na ɔwɔ tumi sen biara wɔ asase so no twaa mpoa sɛ: “Onyame bɛn na obeyi mo afi me nsam?” (Daniel 3:15) Na mmerante baasa no wɔ wɔn Nyankopɔn tumi a ɔde bɛbɔ wɔn ho ban no mu ahotoso koraa, nanso wɔannya adwene sɛ sɛnea ɛte biara no ɔbɛyɛ saa. Enti, wobuae sɛ: “Yɛn Nyankopɔn a yɛsom no no betumi ayi yɛn.” (Daniel 3:17) Nokwarem no, sɛ wɔmaa ogya fononoo no dɔɔ mpɛn ason mpo a, anka ɛrenyɛ asɛnnennen mma tumi nyinaa wura Nyankopɔn no. Ɔbɔɔ wɔn ho ban, na ɛmaa ɔhene no gye toom sɛ: “Onyankopɔn bi nni hɔ a obetumi agye onipa sɛɛ.”—Daniel 3:29.
11 Yehowa daa ne tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban no adi wɔ ɔkwan a ɛyɛ nwonwa so nso bere a oyii ne Ba a ɔwoo no koro no nkwa bɛhyɛɛ Yudani baabun Maria awotwaa mu no. Ɔbɔfo bi ka kyerɛɛ Maria sɛ ‘obenyinsɛn, na wawo ɔbabarima.’ Ɔbɔfo no kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: ‘Honhom kronkron bɛba wo so, na nea ɔwɔ sorosoro no ahoɔden abɛkata wo so.’ (Luka 1:31, 35) Ɛte sɛ nea na Onyankopɔn Ba no mmaa tebea a ɛba fam koraa saa mu da. So na ɛna a ɔyɛ onipa no bɔne ne ne sintɔ bɛka akokoaa no? So na Satan betumi apira Ɔba no anaasɛ wakum No ansa na wɔawo no? Dabida! Sɛnea yɛbɛka no no, Yehowa too ɔfasu twaa Maria ho hyiae sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara—sintɔ biara, ɔsɛefo biara, onipa wudifo biara, anaa adaemone biara—ntumi nsɛe akokoaa a na ɔrenyin wɔ yafunum no, fi bere a wonyinsɛn no no. Yehowa kɔɔ so bɔɔ Yesu ho ban wɔ ne mmofraberem. (Mateo 2:1-15) Ná obiara ntumi mfa ne nsa nka Onyankopɔn Dɔba no de bɛkɔ akosi bere a na wahyɛ no.
12. Dɛn nti na Yehowa bɔɔ ankorankoro bi ho ban anwonwakwan so wɔ Bible mmere mu?
12 Dɛn nti na Yehowa bɔɔ ankorankoro bi ho ban anwonwakwan so saa? Mpɛn pii no, biribi a ɛho hia kɛse koraa nti na ɛmaa Yehowa bɔɔ ankorankoro bi ho ban: n’atirimpɔw mmamu. Sɛ nhwɛso no, na tra a abofra Yesu bɛtra nkwa mu no ho hia na ama Onyankopɔn atirimpɔw a adesamma nyinaa benya so mfaso no abam. Tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban a ɔde dii dwuma ho kyerɛwtohɔ pii no yɛ Kyerɛwnsɛm a efi honhom mu a “wɔakyerɛw ama yɛn kyerɛkyerɛ sɛ yɛmfa boasetɔ ne kyerɛw nsɛm no mu awerɛkyekye so nnya anidaso” no fã. (Romafo 15:4) Yiw, nhwɛso ahorow yi hyɛ gyidi a yɛwɔ wɔ yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ tumi nyinaa wura no mu den. Nanso, ahobammɔ bɛn na yebetumi ahwɛ kwan afi Onyankopɔn hɔ nnɛ?
Nea Onyankopɔn Ahobammɔ Nkyerɛ
13. So ɛyɛ nhyɛ sɛ Yehowa yɛ anwonwade ahorow ma yɛn? Kyerɛkyerɛ mu.
13 Onyankopɔn ahobammɔ ho bɔhyɛ no nkyerɛ sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ Yehowa yɛ anwonwade ahorow ma yɛn. Dabi, yɛn Nyankopɔn nhyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛma yɛanya asetra a ɔhaw biara nnim wɔ nhyehyɛe dedaw yi mu. Yehowa asomfo anokwafo pii ahyia amanehunu a emu yɛ den, a nea ɛka ho bi ne ohia, ɔko, nyarewa, ne owu. Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no pefee sɛ wobetumi akunkum wɔn mu binom esiane wɔn gyidi nti. Ɛno nti na Yesu sii hia a ehia sɛ wogyina kodu awiei so dua no. (Mateo 24:9, 13) Sɛ Yehowa de ne tumi di dwuma de gye yɛn anwonwakwan so wɔ nsɛm nyinaa mu a, Satan betumi anya biribi agyina so de atwa Yehowa mpoa na wama nokwarem a yefi som Onyankopɔn no ho aba asɛm.—Hiob 1:9, 10.
14. Nhwɛso ahorow bɛn na ɛkyerɛ sɛ Yehowa mmɔ n’asomfo nyinaa ho ban wɔ akwan koro so bere nyinaa?
14 Wɔ Bible mmere mu mpo no, Yehowa amfa ne tumi a ɔde bɔ nneɛma ho ban no ankora n’asomfo ankorankoro biara so amfi ɔpatuwu ho. Sɛ nhwɛso no, Herode kum ɔsomafo Yakobo bɛyɛ afe 44 Y.B. mu; nanso ɛno akyi bere tiaa bi no, wogyee Petro ‘fii Herode nsam.’ (Asomafo no Nnwuma 12:1-11) Na Yohane, Yakobo nua no, traa ase kyɛe sen Petro ne Yakobo nyinaa. Ɛda adi pefee sɛ, yentumi nhwɛ kwan sɛ yɛn Nyankopɔn bɛbɔ n’asomfo nyinaa ho ban wɔ ɔkwan koro so. Afei nso, “ɛbere ne asiane” to yɛn nyinaa. (Ɔsɛnkafo 9:11, NW) Ɛnde, ɔkwan bɛn so na Yehowa bɔ yɛn ho ban nnɛ?
Yehowa Bɔ Yɛn Ho Ban Honam Fam
15, 16. (a) Adanse bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ Yehowa abɔ n’asomfo ho ban sɛ kuw wɔ honam fam? (b) Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa bɛbɔ n’asomfo ho ban mprempren ne “ahohia kɛse” no mu?
15 Nea edi kan no, susuw honam fam ahobammɔ ho hwɛ. Sɛ́ Yehowa asomfo no, yebetumi ahwɛ ahobammɔ a ɛte saa no kwan sɛ́ kuw. Ɛnte saa a anka ɛbɛyɛ mmerɛw koraa ama Satan sɛ ɔbɛkyere yɛn. Susuw eyi ho hwɛ: Biribiara renyɛ Satan, “wi yi ase sodifo” no anigye sɛ obegu nokware som. (Yohane 12:31; Adiyisɛm 12:17) Nniso ahorow a wɔyɛ den paa no bi abara yɛn asɛnka adwuma no, na wɔabɔ mmɔden sɛ wɔbɛtɔre yɛn ase koraa. Nanso, Yehowa nkurɔfo agyina pintinn, na wɔakɔ so aka asɛm no a wonnyaee da! Dɛn nti na aman a wɔyɛ den no ntumi mmaa Kristofo kuw a wosua na ɛte sɛ nea wonni ahobammɔ no nnyaee adwuma no? Efisɛ Yehowa de ne ntaban a emu yɛ den no abɔ yɛn ho ban!—Dwom 17:7, 8.
16 Na ɛdefa honam fam ahobammɔ wɔ “ahohia kɛse” a ɛreba no mu ho nso ɛ? Enhia sɛ yesuro Onyankopɔn atemmu no. Anyɛ yiye koraa no, “[Yehowa, NW] nim sɛnea obeyi wɔn a wɔde fɛre som no afi sɔhwɛ mu, na wɔama wɔatwe wɔn a wɔnteɛ aso de wɔn asie atemmu da.” (Adiyisɛm 7:14; 2 Petro 2:9) Enkosi saa bere no, yɛn adwene betumi asi yɛn pi wɔ nneɛma abien ho bere nyinaa. Nea edi kan, Yehowa remma kwan mma wɔntɔre n’asomfo anokwafo ase mfi asase so da. Nea ɛto so abien, ɔbɛma mudi mu kurafo daa nkwa wɔ ne trenee wiase foforo no mu—sɛ ɛho hia a, denam owusɔre so. Wɔ wɔn a wowuwu no fam no, baabiara nni hɔ a eye sen sɛ wɔn ho asɛm bɛtra Onyankopɔn nkae mu.—Yohane 5:28, 29.
17. Ɔkwan bɛn so na Yehowa nam N’asɛm no so bɔ yɛn ho ban?
17 Ɛnnɛ mpo, Yehowa nam ‘n’asɛm’ a nkwa ne ahoɔden wom a etumi sakra nnipa koma ne wɔn asetra no so bɔ yɛn ho ban. (Hebrifo 4:12) Sɛ yɛde ne nnyinasosɛm di dwuma a, ebetumi abɔ yɛn ho ban wɔ honam fam wɔ akwan bi so. Yesaia 48:17 ka sɛ: “Me [Yehowa, NW], . . . mene nea ɔkyerɛ wo nea eye ma wo.” Ɛyɛ nokwasɛm sɛ, sɛ yɛma yɛn asetra ne Onyankopɔn Asɛm hyia a, ebetumi ama yɛn akwahosan ayɛ papa na yɛn nkwa nna aware. Sɛ́ nhwɛso no, esiane sɛ yetie Bible afotu a ese yɛntwe yɛn ho mfi aguamammɔ ho na yɛnhohoro yɛn ho mfi efĩ nyinaa ho no nti, yɛkwati nneyɛe a ɛho ntew ne su ahorow a ɛsɛe nneɛma pii wɔ abɔnefo asetram no. (Asomafo no Nnwuma 15:29; 2 Korintofo 7:1) Hwɛ aseda a yɛde ma wɔ ahobammɔ a Onyankopɔn Asɛm ma yenya no ho!
Yehowa Bɔ Yɛn Ho Ban Honhom Fam
18. Honhom fam ahobammɔ bɛn na Yehowa de ma yɛn?
18 Nea ɛho hia sen biara no, Yehowa bɔ yɛn ho ban honhom fam. Yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ dɔ no bɔ yɛn ho ban fi honhom fam haw ho denam nea ehia a ebetumi ama yɛagyina sɔhwɛ ahorow ano na yɛabɔ yɛne ne ntam abusuabɔ ho ban a ɔde ma yɛn no so. Enti ɛnyɛ mfe kakraa bi na Yehowa yɛ ade de bɔ yɛn nkwa ho ban, na mmom kosi daa. Susuw Onyankopɔn nsiesiei ahorow a ebetumi abɔ yɛn ho ban honhom fam no kakraa bi ho hwɛ.
19. Ɔkwan bɛn so na Yehowa honhom betumi ama yɛagyina sɔhwɛ biara a ebia yebehyia no ano?
19 Yehowa ne “mpaebɔ tiefo.” (Dwom 65:2) Sɛ ɛte sɛ nea asetram haw no mu yɛ den dodo a, yɛn komam asɛm a yɛbɛka akyerɛ no no betumi ama yɛanya ahotɔ kɛse. (Filipifo 4:6, 7) Ebia ɔrenyi yɛn sɔhwɛ ahorow mfi hɔ anwonwakwan so de, nanso obetumi ama yɛn nyansa a yɛde bedi ho dwuma de abua mpae a yefi komam bɔ no. (Yakobo 1:5, 6) Nea ɛsen saa no, Yehowa de honhom kronkron ma wɔn a wobisa no no. (Luka 11:13) Saa honhom a ɛwɔ tumi no betumi ama yɛagyina sɔhwɛ anaa ɔhaw biara a ebia yebehyia no ano. Ebetumi ama yɛanya “tumi a ɛboro so” ma yɛde agyina akosi sɛ Yehowa beyi ɔhaw a ɛyɛ yaw nyinaa afi hɔ wɔ wiase foforo a abɛn yiye no mu.—2 Korintofo 4:7.
20. Ɔkwan bɛn so na wɔnam yɛn mfɛfo asomfo so betumi ada Yehowa tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban no adi?
20 Ɛtɔ mmere bi a, Yehowa nam yɛn mfɛfo asomfo so na ɛda ne tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban no adi. Yehowa atwe ne nkurɔfo aba wiase nyinaa ‘anuanom fekuw’ mu. (1 Petro 2:17; Yohane 6:44) Yehu sɛnea Onyankopɔn honhom kronkron no ahoɔden kanyan nkurɔfo ma wɔyɛ adepa wɔ saa onuayɛ kuw a ɔdɔ wom no mu. Saa honhom no ma yɛsow aba—su ahorow a ɛyɛ fɛ, a ebi ne ɔdɔ, ayamye, ne papayɛ. (Galatifo 5:22, 23) Enti, sɛ yɛwɔ ahohia mu na yɛn yɔnko gyidini bi ma yɛn afotu anaasɛ ɔka nkuranhyɛ nsɛm kyerɛ yɛn a, yebetumi ada Yehowa ase wɔ n’ahobammɔ a ɔda no adi wɔ ɔkwan a ɛte saa so no ho.
21. (a) Honhom fam aduan a ɛba ne bere mu bɛn na Yehowa nam “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no so de ma? (b) Ɔkwan bɛn so na w’ankasa woanya nsiesiei a Yehowa ayɛ de bɔ yɛn ho ban honhom fam no so mfaso?
21 Yehowa ma yɛn biribi foforo a ɔde bɔ yɛn ho ban: honhom fam aduan a ɛba ne bere mu. Nea ɛbɛboa yɛn ma yɛanya ahoɔden afi Yehowa Asɛm mu no, wama “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no ahyɛde sɛ wɔmfa honhom fam aduan mma. Saa akoa nokwafo no de nhoma, a ebi ne Ɔwɛn-Aban ne Nyan!, ɛne asafo nhyiam ahorow, amansin ne amantam nhyiam di dwuma ma yɛn “aduan ɛbere a ɛsɛ mu”—nea yehia, ne bere a yehia no. (Mateo 24:45) So woate biribi wɔ Kristofo nhyiam ase—wɔ mmuaema, ɔkasa, anaa mpaebɔ mu—a ɛma wunyaa ahoɔden ne nkuranhyɛ a wuhia no pɛn? So yɛn nsɛmma nhoma no mu asɛm pɔtee bi aka wo koma pɛn? Kae sɛ, Yehowa yɛ nsiesiei a ɛte saa nyinaa na abɔ yɛn ho ban honhom fam.
22. Ɔkwan bɛn so na Yehowa de ne tumi di dwuma bere nyinaa, na dɛn nti na saa a ɔyɛ no so wɔ mfaso ma yɛn?
22 Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa yɛ kyɛm “ma wɔn a woguan toa no nyinaa.” (Dwom 18:30) Yɛte ase sɛ ɔmfa ne tumi mmɔ yɛn ho ban mfi asiane nyinaa ho mprempren. Nanso, ɔde ne tumi a ɔde bɔ nneɛma ho ban no di dwuma ma n’atirimpɔw bam. Awiei koraa no, saa a ɔyɛ no boa ne nkurɔfo. Sɛ yɛbɛn Yehowa na yɛtra ne dɔ mu a, ɔbɛma yɛn daa nkwa wɔ pɛyɛ mu. Nokwarem no, bere a ɛno wɔ yɛn adwenem no, yebetumi abu nhyehyɛe yi mu amanehunu biara sɛ ‘ɛyɛ mprempren de a ɛyɛ hare.’—2 Korintofo 4:17.
Dwom 23:1-6 Sɛ́ Oguanhwɛfo Kɛse no, ɔkwan bɛn so na Yehowa bɔ ne nkurɔfo a wɔte sɛ nguan no ho ban na ɔhwɛ wɔn so?
Dwom 91:1-16 Ɔkwan bɛn so na Yehowa bɔ yɛn ho ban fi honhom fam amanehunu ho, na dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ama yɛaba n’ahobammɔ ase?
Daniel 6:16-22, 25-27 Ɔkwan bɛn so na Yehowa kyerɛkyerɛɛ tete hene bi Ne tumi a ɔde bɔ nneɛma ho ban no ho ade, na dɛn na yebetumi asua afi saa nhwɛso yi mu?
Mateo 10:16-22, 28-31 Ɔsɔretia bɛn na yebetumi ahwɛ kwan, nanso dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yesuro asɔretiafo?
Dɛn ne “bon kɛse” no na dɛn na Yehowa asomfo bɛyɛ na wɔanya ahobammɔ wɔ hɔ?